MP3,Memory Stick မှာမကြာခဏတွေ့ တတ်သော Virus များရှင်းနည်း | Forum
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ…MP4,MP3,Memory Stickတွေမှာ
သည်းခံပြီးဆက်ဖတ်ပေတော့..ဟီးး :D့ MP4,MP3,Memory Stick ထိုးလိုက်တာနဲ့ …
Autorun.inf တို့Recycled.exe တို့Rundll32.exe တို့ ..ဘာတို့ ညာတို့ ပေါ့…အဲဒီ
virus တွေကို USB Disk Security မှာလာပြတယ်လေ…အဲဒါတွေကို
အရမ်းရမ်းကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့..Kasper ကတောင် မဖျက်နိုင်ဘူး… USB Disk Security
မှာ Delete လုပ်လဲ တစ်ချို့ဟာတွေကို delete လုပ်လို့ မရပါဘူး……အဲဒီတော့ ဘာ
software မှ သုံးစရာမလိုတဲ့ ကျွန်တော်ပေးတဲ့ နည်းလေး သုံးကြည့်လိုက်..ရှိသမျှ virus
တွေ အကုန်သေသွားစေရမယ်..(ဟဲဟဲ..ငါကွ…Kasper လောက်တော့သနားတယ်….ဟီးးး
:D).. ကျွန်တော့်ရဲ့virus ရှင်းတဲ့နည်းက တစ်ခြားထွေထွေထူးထူး ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး….
Bat file နဲ့command တွေရေးပြီးရှင်းတဲ့နည်းလေးပါ…..ပထမဦး ဆုံး start>RUN>notepadကိုဖွင့်ပါ…ပြီးရင်
အောက်မှာ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ command တွေကို copy ကူးထည့်လိုက်ပါ…
@echo del: E:Autorun.inf del: F:Autorun.inf del: G:Autorun.inf del: H:Autorun.inf del: E:Recycled.exe del: F:Recycled.exe del: G:Recycled.exe del: H:Recycled.exe del: E:RUNDLL32.exe del: F:RUNDLL32.exe del: G:RUNDLL32.exe del: H:RUNDLL32.exe @echo
ပြီးရင်တော့.. နာမည်တစ်ခုခု.bat (eg. Kill.bat) ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ MP4,MP3,Memory
Stick ထဲမှာ Save လိုက်ပါ…
Save ပုံ Save နည်းကို အောက်မှာကြည့်ပါ။
အဲဒီ Kill.bat ဆိုတဲ့ file လေးကိုတော့ မဖျက်ပစ်လိုက်နဲ့နော်…
MP4,MP3,Memory Stick ထိုးတိုင်း အဲဒီ file လေးကို double click လုပ်ပြီး run လိုက်ပေါ့…
ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ MP4,MP3,Memory Stick ထဲက virus တွေအကုန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်……
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..ဆရာသမားဆီက ပင့်လာတာနော် (ဇာနည်အောင်)
Posted အဲဒီအချိန်က Saturday, March 16, 2013